DriverPack | Twe drivers foforo a sika bia nka ho
DriverPack CloudHwehwε DriverƐma abεεfo nnimdiefoͻ
DriverPack εbε hyehyε drivers ama wo kwa na asanso wo drivers ho haw ano aduro
Nya drivers biara a εho hia
DriverPack εyε berε pa mu boafo na εsanso hyehyε wo kͻmputa no ntεmtεm so
Nhyehyεε yi sika biara nka ho, na εsanso yε mma nnimdiefoͻ ne ahyεasefoͻ nyinara
Sika nka ho
DriverPack yε de ma kwa
DriverPack ne virus banbͻfoͻ n’adi dwuma bom εbͻ wo kͻmputa ho ban
Ɛyε ma abεεfo nyinara
DriverPack na εwͻ driver ho noͻma pii εwͻ wiase yi mu, nama w’atumi de ahehyε wo kͻmputa
DriverPack Yε mmrε pa mu boafo na εsanso hyehyε wo abεεfo afidie ntεntεm kwan so
Nnipa dodoͻ a wͻn de DriverPack di dwuma no nyini daadaa nyinara
DriverPack su ahodoͻ
Nkyea! Me din de Artur Kuzyakov. Me yε ͻtwerεfoͻ ne dwumawura εma DriverPack
Mfie 8 nie na yε twerε kͻmputa nhyehyεε kakra bi, na εno ho na yε de ayε dwumakuo kεse yi a aboa nnipa bεyε ͻpepem 40 wͻ wiase yi mu ama wͻn ahyehyε wͻn kͻmputa!
Mmrε yi, yεn kͻmputa nhyehyεε adi dwuma ntεntεm so. Ɛnε DriverPack na ekura drivers ho noͻma pii wͻ wiase yi mu, a asi servers a adi dwuma ntεntεm so sen server biara a εwͻ wiase yi mu. Sε neε εbε yε a wo bε tumi asi drivers wͻ wo kͻmputa so ntεntεm so, efiri sεε yε de machine learning an adi dwuma. Y’aboa yε ho enya wei mo nyinara ama afei koraa mpo no yε de dwumadie yi kyε kwa a yεn ngye wo sika biara.
Me ne me kuo no ani agye yεn dwumadie yi ho, yε bͻ mpaε sε yε bεtumi de mmoa ama nnipa pii ntεntεm kwan so. Yε sεe yεn mmrε de bͻ wo mmrε ho ban!
Wei nso yε neε Dmitry Medvedev, ͻmanpanin abεdiakyi εma Russia man, εdwen fa DriverPack Solution ho
DriverPack ho nsɛm amanneɛbɔ
DriverPack yɛ nhyehyɛɛ bi a ɛkura drivers ma Windows a Artur Kuzyakov kuo ato wↄn boa se ayi na wↄn asi so dua. Nhyehyɛɛ yi hwehwɛ wo kↄmputa no mu na asi drivers a ehia no ama wo, ɛno boa ma wo si ↄhaw pii kwan: Neɛ adi kan, ɛbɛ ma wo kↄmputa no adi dwuma ntɛntɛm so (ɛno ho mfasoↄ no ɛtaa ba mmrɛ a akↄmputa pii wↄ afidie baako mu); neɛ ɛtↄ so, ɛboa ma dwumadie kↄ so yie. Sua pii
Ɛnε, DriverPack na εwͻ drivers ho noͻma wͻ wiase mu na εsanso kyerε kasa mu ahodoͻ 45 na adi dwuma wͻ nnipa ͻpepem 42 kͻmputa ho. Sua pii
Efiri da a DriverPack Solution si so, agye din wͻ wiase mu afanaa nyinara. Ada ne ho adi ama nnipa pii a εde ma kwa. Wei ne nsusuaεε a ewͻ DriverPack Solution ne wͻn asikwanfo mu. Sua pii
DriverPack Solution nhyehyεε no yε anika, εma wo noͻma pii a wo bεtumi ayε a yε nsεsoͻ ntumi mma wo. Obiara tumi siesie akwanhyia biara a εbε si wͻ kͻmputa no mu na w’asan de drivers ahodoͻ asi ne kͻmputa no mu klike mienu pε. Sesei yi deε drivers ahodoͻ a εwͻ DriverPack noͻma mu bε bro ͻpepem 1.1 na y’asͻ ni nyinara ahwε dedaa. Sua pii
Ɛnyε den sε wo de DriverPack bε hwehwε drivers mono ama wo kͻmputa. Neε εyε anika wͻ ho nso ne sεε εnyε wo nipa no na wo de drivers no bε si wo kͻmputa no mu. DriverPack bε yε ni nyinara ama wo amonomuhͻa. Sua pii
DriverPack Protect boa ma wo bͻ wo kͻmputa ho ban firi virus dwuadie a n’εmpo virus banbͻfoͻ bi ntumi nyε. Sua pii
Mfomsoͻ baako a εwͻ Windows kuo ho a εyε m’adwen kyerε no ne sεε, mmrε biara a wo de Windows foforo bε gu wo kͻmputa so no, εsε sεε wo san sεe mmrε kͻ hwehwε drivers twe. 2008 na me yεε m’adwen sεε mε sͻ ͻhaw yi ano, nti me twerε kͻmputa ho nhyehyεε a wͻ frε no DriverPack. Ɛnε nnipa bεyε ͻpepem 40 na εde adeε yi di dwuma, na me gye di nso sεε Windows bε si haw a εfa wͻn drivers nsεm no ho, a εnfa ho sεε y’εdaso de dwuma. Sua pii
Su foforo no ma wo kwan pii so a wo tumi de eyi drivers a εda w’akoma so. Ɛyε asεm kεseε ma kͻmputa asiesiefoͻ pii. Na afei nso wo tumi de driverpacks foforo hyε DriverPack mu sen sεε wo bε yi afiri mu. Sua pii
Aseda nkͻma grapevine, wͻn ho nti y’atumi akyerε kasa ahodoͻ 45 a yεn kuo ankasa nka ho. Sua pii
DriverPack yε ma Kͻmputa mu ahodoͻ nyinara
Aane, εma Kͻmputa biara - a y’asͻ ahwε!
DriverPack yε εma abεεfo biara
Ɛnpo εma USB 3.0 εwo Windows 7 SP1 so
afidie a wͻn de ka nsεm kyerε kͻmputa
afidie a εbͻ nkaeε
afidie a edi dede ho dwuma
sini hwεfo kaade
internet so kamεra
Video card abↄfo a wↄn agye din
Video card nsɛso a agye din
DriverPack yi drivers ma video cards nsɛso nyinara, neɛ agye din no bi ni
Abͻfo a w’agye din
DriverPack yi drivers ma wo kͻmputa nnwinade a efiri abͻfoͻ biara. Neɛ agye din no bi nie:
Drivers ma Acer
Drivers ma HP
Drivers ma ASUS
Drivers ma Sony
Afei wotumi hyehyε wo kͻmputa εwͻ klik baako pε so
Twe nε hyε DriverPack Online ase
Hyehyε wo Kͻmputa no wͻ dwumadie baako a ne nteaseε nyε den
Anigyeε! M’abεεfo afidie no ayε mono!
Be ka DriverPack kuo no ho
Di yεn nkasiebͻ akyi na fa ho hy3 yεn nkͻmͻbͻ mu
DriverPack kora drivers ma Windows su a agye din
drivers εma Windows 11, drivers εma Windows 10, drivers εma Windows 8.1, drivers εma Windows 8, drivers εma Windows 7, drivers εma Windows XP
Apps nhyinara su
Yi DriverPackKↄmputa nnwinade ho abↄfoDevice ID
Ɛma abεεfo nnimdiefoͻƐma kasa kyerεfoͻEnd User License AgreementTerms of Service
W’ahu ntwerɛɛ nfomsoͻ anaa?
Yi na mia Ctrl + Enter